Qarax ka dhacay Qansaxdheere | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax ka dhacay Qansaxdheere
Dadka ku dhintay qaraxa waxaa kamid ah nin hay'ad u shaqeynayay iyo gudoomiye ku xigeenka degmada, iyadoo ay dhaawacmeen tiro kale oo Isbitaalka la dhigay.
QANSAXDHEERE, Soomaaliya - Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jiraan gudoomiye ku xigeen iyo nin u shaqeeya hay'ad samafal, tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax culus oo Maanta ka dhacay degamda Qansaxdheere, ee gobolka Baay.
Sarkaal Booliska katirsan ayaa Keydmedia Online u xaqiijiyay in qaraxa uu ka dhacay walxo qarxa oo lagu xiray gaariga gudoomiyaha degmada, kaasoo ku qarxay meel aan ka fogeyn xarunta Maamulka. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa.
0 Comments Topics: al-shabaab gobolka baay qarax